Signkick Misika: Kuunza Mabhodhi ku 'Dzvanya-ku-Kutenga' Chizvarwa | Martech Zone
Signkick Misika: Kuunza Mabhirabhodi kuiyo 'Dzvanya-kune-Kutenga' Chizvarwa
Chipiri, Mbudzi 1, 2016 Chipiri, Mbudzi 1, 2016 Andy Hamblin
The Kunze Kwekushambadzira Kumba indasitiri indasitiri hombe uye ine mari. Muzera rino redhijitari, kubatana nevatengi kana ivo vari "kuenda" munzvimbo dzeveruzhinji kuchine kukosha kukuru. Mabhodhi emabhodhi, dzimba dzekuchengetedza mabhazi, maposita uye kushambadzira kwekufambisa ese chikamu chehupenyu hwevatengi-hwemazuva ese. Ivo vanopa asingaverengeki mikana yekuburitsa pachena meseji kune akakodzera vateereri pasina kukwikwidza kutariswa pakati pezviuru zvevamwe kushambadzira.
Asi hazvisi nyore nguva dzose kutora Mushandirapamwe Wekunze Kwemba kubva pasi. Dambudziko guru rakatarisana neindasitiri yeOOH kugona kwayo…
Une yakasarudzika £ 100,000 pamushandirapamwe weOOH?
Dambudziko OOH Media Varidzi rakatarisana naro nderekuti rinovabhadharira zvakangofanana kuronga nekuburitsa £ 100,000 mushandirapamwe sezvainoita mushandirapamwe we £ 500. Iyo yakafanana nguva yekutengesa, iyo yakafanana nguva yekutonga, iyo yakafanana dhizaini nguva yese inopinda mune maviri-mavhiki marefu bhiribhodi kushambadzira yeJoe Bloggs 'emunharaunda mapombi emvura, sezvazvinoita kune yenyika, hombe-bhajeti mushandirapamwe unomhanya kwemwedzi.
Hazvina-brainer chaizvo. Kana iwe uri muridzi wenhau nemabhiribhodi ekurendesa, uri kuenda kukoshesa iwo mapikisheni emunyika anogona kubhadhara mari hombe. Izvo zvinogona kuita kuti zviomere mabhizimusi madiki ane mwero bhajeti kuti vatarise mukati kana vachihaya kunze kwekushambadzira nzvimbo. Uye izvo zvinonyadzisa, zvese kune iwo madiki mabhizinesi ari kurasikirwa nemikana mikuru yekushambadzira, pamwe nevaridzi venhau, vari kurasikirwa nevazhinji vangangove vatengi.
Kunze Kumba nyanzvi dzekushambadzira, Chiratidzo ndakagadzira mhinduro kudambudziko iri. Ivo vari kubatana nevaridzi venhau uye vanopa masevhisi kuti vagadzirise iyo yese yekubhuka maitiro. Automation inoita kuti maitiro awedzere kudhura, zvichireva kuti varidzi venhau havafanirwe kudzosera vatengi kure zvichienderana nemabhajeti mashoma Iyo software yavari kushandisa kuita izvi inonzi Signkick Misika.
Signkick Nzvimbo dzeMisika OOH Automation
Signkick Marketplaces isoftware iyo varidzi venhau vanogona kumisikidza-kugonesa vatengi kuti vawane uye vahodha yavo yega nzvimbo yekushambadzira online. Iyo inosangana-kumusoro pamwe nevaridzi venhau 'avo vepo masystem ekuratidzira kumusoro-ku-ikozvino kuwanikwa kwemaposta saiti kune vatengi pamamepu epamhepo.
Yakagadzirirwa kuti OOH yekushambadzira pamusika iwanikwe kune wese munhu, Signkick misika inogonesa mabhizinesi ku:
Tsvaga uye bhuku nzvimbo yekushambadzira online - Vatengi vanogona kukurumidza kuona kuti ndedzipi posita saiti, mabhodhi uye madhijitari skrini aripo, kwenguva yakareba sei uye nemutengo wei. Varidzi veMedia vanogona kusarudza yavo yakasarudzika tsika, semutengo unoratidzwa nzvimbo, nerumwe ruzivo rwakawanda kuratidza, uye kana chikuva chakavhurwa ruzhinji, kana kungo kune avo vavanovimba navo vatengi uye vamiririri.
Tevera mushandirapamwe - Kamwe nzvimbo yekushambadzira payakatengwa vatengi vanogona kuteedzera mafambiro ayo, zvakanyanya sezvaungaita pane pasuru yekuendesa system.
Manage mifananidzo - vatengi vanogona kurodha yavo yega mifananidzo, kana kushanda neMedia Varidzi kugadzira mifananidzo yekushambadzira kwavo. Iyo sisitimu ine danho rakatarwa, iro rinotanga nekutumira mifananidzo yehunyanzvi kune vatengi panguva yekubhuka uye inopera nemifananidzo ichiendeswa kune yako yaunoda purinda.
Gamuchira zviyeuchidzo uye zvinyorwa zveemail - otomatiki zviyeuchidzo uye zvigadziriso zvinovimbisa kuti nhanho imwe neimwe yemaitiro inofambiswa zvakanaka kumutengi, asi semaoko-akasununguka kumuridzi we media sezvinobvira
Kusiyana nemamwe masoftware anowanikwa ekubhuka kunze kwekushambadzira nzvimbo, Signkick Misika haingotarise pane Dhijitari Kunze Kwemba. Iyo sisitimu inogonesa vatengi kuteedzera yavo yechinyakare yekudhinda maposta nemabhodhi emabhodhi nenzira imwecheteyo iyo yavanogona kuteedzera yavo dhijitari mapepa.
Kuzivisa mabasa kuvhura mikana mitsva yeVaridzi veMedia
Signkick Misika ine chechipiri basa, iko kuunganidza uye kuongorora data zvichienderana nekuti ndiani arikutenga OOH kushambadza nzvimbo. Nekuongorora maitiro evatengi vavo, izvo zvavari kutarisa uye nguva, VeMedia Varidzi vanogona kushandisa data-yakatsigirwa saiti mitengo, kugadzira mari nyowani nekugadzira zvinoshanda zvekushambadzira zvakare.
Signkick Nyaya yekudzidza: JCDecaux
Hove huru muindasitiri yeOOH, JCDecaux nguva pfupi yadarika yakashanda neSignkick Marketplaces kutora otomatiki kubhuka kwenzvimbo dzekushambadzira muBelgium. JCDecaux yakaziva kukosha kwekugadzirisa maitiro avo kuitira kuvhura nzira nyowani dzebhizinesi.
Nekuita iyo nzira yekubhuka kuti inyatsoita basa, uye nekugonesa vatengi kuti vagadzirise yavo mishandirapamwe, JCDecaux vakakwanisa kutarisa zvakanyanya kutarisisa nzira yekutengesa uye kuvaka hukama nevatarisiri vatengi. Izvi zvinoreva zvakare kuti ivo vakakwanisa kutengesa yekushambadzira nzvimbo uye nekuvaka hukama nevatengi vane madiki mabhajeti. Kana iwo madiki mishambadziro ekushambadzira otanga kukura, JCDecaux ndiyo ichave yekutanga kuziva.
Zvese zvakanaka kutsva, neJCDecaux's Website itsva yanga ichisimuka uye ichimhanya kwemwedzi miviri chete, asi kubhuka kuri kutouya.
Kushandisa michina ndiyo ramangwana reOOH
Nguva dziri kuchinja, uye ndozvinoitawo nzira iyo vanhu vanotarisira kutenga. Mune ino dhijitari zera iwe unogona kutenga zvese kubva kuzvipfeko uye chikafu, kumota uye mazororo online. Saka wadii kuposita uye mabhodhi?
Signkick Misika inobvumira varidzi venhau kuti vawane iyo tinya-kutenga-chizvarwa, uye kugamuchira vatengi vane mashoma mabhajeti. Automated booking uye kuronga kwekushambadzira mishandirapamwe inobvumira munhu wese kuwana mukana kune masevhisi nemikana iyo yaimbove inongowanikwa chete kune makuru vatengi
Tags: JCDecauxOOHOOH kushandisa michinakunze kwemushachiratidzo
Andy anga ari muindastiri yekunze kweanopfuura makore gumi, achishanda pane zvese kuronga uye kutenga kwemishandirapamwe nekutengesa. CV yake inovhara mazhinji emazita anoremekedzwa mubhizinesi kusanganisira Posterscope, JCDecaux uye ECNlive usati Wajoina. Chiratidzo muna 2014. Ndiye mutsigiri anofarira wekuunza tekinoroji inoshanda kune poster indasitiri nechinangwa chekuvandudza mashandiro uye mari inowanikwa.
Zvakanakira Vhidhiyo yeKutsvaga, Zvemagariro, Email, Tsigiro… uye Zvimwe!